एक्लो जीवन कि वैवाहिक जीवन रमाईलो ? – Janapriyakhabar
मुख्य पृष्ठ / जीवनशैली
एक्लो जीवन कि वैवाहिक जीवन रमाईलो ?
६ चैत्र २०७६, बिहीबार प्रकाशित
जीवन विताउनका लागि श्रीमान् वा श्रीमती नै चाहिन्छ त ? दाम्पत्य जीवन विताउनै पर्छ ? यसमा एउटा ठूलो जमातले सहमतिको टाउको हल्लाउन सक्छन् । तर, एउटा जमात यस्ता पनि छन्, जो दाम्पत्यलाई बन्धन ठान्छन् र त्यसबाट उन्मुक्त जीवन विताउन राजी हुन्छन् ।
विवाह गर्नैपर्छ भन्नेमा सबैको राय मिल्छ भन्ने छैन । कतिपय यस्ता हुन्छन्, जो विवाहलाई अनिवार्य ठान्दैनन् । उनीहरु विवाह नगरी एक्लो जीवन विताउनमै कल्याण मान्छन् । अहिले त केसम्म हुन्छ भने, कुनै पुरुष वा महिलाबाट सन्तान जन्माउने र अविवाहित आमा वा बुवाको रुपमा जीवन विताउने ।
विवाह गर्नैपर्छ त ?
हुन त विवाह हाम्रो परम्परा हो । संस्कृति हो । प्रकृतिले पनि दुई विपरित लिंगीको समायोजनलाई स्विकारेको छ । सृष्टि निरन्तरताको लागि पुरुष र महिलावीच संसर्ग हुनैपर्छ । उनीहरु शारीरिक रुपमा एक हुनैपर्छ । प्रकृतिको यो नियमले पनि पुरुष र महिलालाई अलग-अलग राख्दैन । उनीहरुको दुई ज्यानलाई एकाकार गराउँछ ।
विवाहको प्रचलन विश्वमै छ । हाम्रा पिता-पूर्खाहरुले यसलाई निरन्तरता दिदै आए । पौराणिक शास्त्रहरुले यसको महत्व र आवश्यक्तालाई उजागर गरिदिए । विवाह आफैमा व्यवस्थित र नियोजित कर्म हो, जसले वंश परम्परालाई निरन्तरता दिन्छ । पूर्विय संस्कारमा जीवनको विभिन्न संस्कार उल्लेख गरिएको छ । त्यसमध्ये एउटा संस्कार विवाह पनि हो । विवाहपछि मानिसहरु गृहस्थी जीवनमा प्रवेश गर्छन् । गृहस्थी जीवन भनेको दाम्पत्य एवं पारिवारिक संरचनाको निर्माण गर्नु पनि हो ।
त्यसो भए विवाह गर्नैपर्छ त ?
यसमा मत विभाजित छ । विवाह गर्नैपर्छ भन्ने केही छैन । हाम्रै ऋषिमुनीहरुले व्रम्हचार्यको महत्वमाथि पनि मन्थन गरेको छ । दाम्पत्य जीवन मात्र होइन कामवासना र यौनबाट समेत मुक्त भएर पालना गर्ने आचार संहिता हो यो ।
विवाह बन्धन कि बाध्यता ?
हुन त विवाहलाई हामी ‘वन्धन’ पनि भन्छौं । अर्थात ‘विवाह-वन्धन’ । उन्मुक्त जीवन विताउन चाहनेहरुका लागि यस्तो वन्धन स्विकार्य हुँदैन । उनीहरु विवाह गर्ने, पति वा पत्नीसँग आफुलाई समायोजन गर्ने, बालबच्चा जन्माउने, हुर्काउने, घर व्यवहार चलाउने कुरालाई झन्झट ठान्छन् । र, अनावश्यक पनि । जीवनलाई मस्त भोग गर्नका लागि उनीहरु विवाह नगरी बस्न रुचाउँछन् ।
यसको अर्थ के भने, विवाह गरेपछि कतिपय आफ्ना रहर, इच्छा, सोंच, चिन्तन त्याग्नुपर्छ । अर्को व्यक्ति -पति वा पत्नी)को कतिपय गल्ती, कमजोरी पनि स्विकार्नुपर्छ । त्यसैले जीवनलाई जसले जसरी बुझ्छन्, त्यही अनुरुप जिउने छुट छ । विवाह वाध्यकारी होइन । विवाह नगरी पनि जीवन सुखपूर्वक विताउन सकिन्छ ।
के छ विवाह गर्नुको फाइदा ?
– दाम्पत्य सुख
– वैधानिक यौनभोग
– आफ्नो बालबच्चा
– सुख-दुखमा साथ
– वंश निरन्तरता
अविवाहित हुनुको फाइदा
– आफ्नो मर्जी अनुसार जीवन जिउन सकिने
– पारिवारिक बन्धन, झन्झट लिन नपर्ने
– सन्तानप्रतिको चिन्ता नहुने
– आर्थिक व्यायभार कम हुने
– अर्काको दुख, बोझ बोक्न नपर्ने
– पारिवारिक जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व वहन गर्न नपर्ने
जवान रहनको लागि चक्लेट सेवन गर्नुस्‌
योग के हो ? यसको वास्तविक अर्थ र इतिहास
आज पुस ३ गते शुक्रवार, तपाईको आजको राशिफल